Cabdikariin Qalbidhagax oo Booqan doona Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Cabdikariin Qalbidhagax oo Booqan doona Galmudug
Cabdikariin Qalbidhagax oo Booqan doona Galmudug
September 29, 2018 admin394
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo dhawaan laga soo daayey xabsiga itoobiya ayaa maalmahan ku sugnaa Magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland, Cabdikariin ayaa maanta gaaray Magaalada Boosaaso Xarunta gobolka Bari halkaas oo si aad ah loogu soo dhaweeyey.
Qalbidhagax ayaa safarkiisa waxaa ku wehliya saraakiil sare oo ka tirsan Jabhadda ONLF, waxaana safar dhulka ku mari doonaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Wareysi uu BBC siiyey Qalbidhagax ayuu ku sheegay inuu tagi doono deegaanada Galmudug, gaar ahaan Magaalooyinka Galkacyo, Cadaado iyo Dusmareeb.
C/kariin Qalbi Dhagax ayaa sheegay in uusan qorshaha safarkiisa ugu jirin in uu tago magaalada Muqdisho ,oo uu sheegay in ay tahay goobtii Itoobiya looga dhiibay .
“Muqdisho waxaa ku sugan shacab i dareensiiyay wanaagga ay ii hayaan, waxayna ahayd inaan booqdo oo aan la kulmo, balse ma doonayo inaan wax kulan ah la yeesho qolyaha maamulka haya,” ayuu yiri Qalbi-dhagax.
Warbaahinta Ceelhuur Online ayaa aheyd middi ugu horeysay ee wax ka qorta xarigga Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbix dhagax.
Madaxweyne Xaaf iyo General Galaal ayaa berigaas doonayey in ay itoobiya ka gataan Qalbidhagax, iyadoo arintaas ay kaga hormareen Madaxda Dowladda Federaalka oo fursada u arkayey dhiibista Qalbi dhagax, balse ay ku noqotay feedaxad dhaawac weyn u geystay.
Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo dib loo dhigay
Markab lagu Afduubtay gacanka Cadmeed
Akhriso magaca Oday goordhow Muqdisho lagu dilay